Sekuyiminyaka eminingi imithombo ye-Kharkov-Verkhne-Kyiv isiza abantu ukuphulukisa izifo ezehlukene. Imithombo yamaminerali ethandwa kakhulu ithululelwa ekuphakameni kweBerezovskaya gully. Kulapha ukuthi i-sanatorium edumile "i-Bermindvody" itholakala (kuphela 20 km ukusuka enkabeni yeKharkov). Kusukela ngo-2008 isebenza njenge-clinical balneological health resort.
Izakhamuzi zendawo kanye nezivakashi ze-resort zibheke njengenye yezinsiza ezingcono kakhulu esifundeni saseSlobozhansky. Abantu abadala nezingane beza lapha ukuchitha amaholidi abo ngezempilo. Iminyango yendlu yokugibela ivuliwe unyaka wonke, izinqubo zokwelashwa zansuku zonke zenziwa lapha.
Impahla eyinhloko yesikhungo semvelo iyimithombo yamaminerali kanye nemvelo enhle kakhulu. Eziseduze azikho amabhizinisi ezimboni nemigwaqo emikhulu, izihlahla ezihlobisa izihlahla, izihlahla eziqhamukayo zikhula yonke indawo, amachibi okufakelwa ngezinhlanzi adalwa. I-dispensary i-oasis phakathi kwepaki elidala, lapho ungakwazi khona ngempela ukuvela empilweni yedolobha elikhulu, ujabulele umoya ohlanzekile, ukuthula nokuhlukaniswa.
I-Sanatorium "i-Bermindvody" (i-Kharkov) inama-cottages angu-9. Njalo ngonyaka, wonke amakamelo asebenza ngokulungisa izimonyo futhi avuselelwe. Ukukhethwa kwamafulethi kukhulu kakhulu: kusuka emakamelweni ajwayelekile kuya kumakamelo e-deluxe. Kubantu abasanda kushada kukhona izaphulelo, ngosuku lokufika "ukuncoma" okumnandi ngesimo se-champagne nezithelo kuhlelwe.
Ungakwazi ukubhuka indawo yokuhlala ngaphambi kwesikhathi. Kukhona i-loggia ebanzi ene-panorama endaweni yepaki. Ezinketho zesabelomali, izakhiwo ezivamile zikhona phansi.
Amakamelo aphezulu anezindlu zokugezela, i-TV, i-friji mini kanye nendawo yokuhlala. Endaweni ngayinye kukhona inthanethi - ukusetshenziswa okukhokhelwayo. Isevisi yamakamelo yenziwa ngezinsuku ezithile, kanye nokulala kokulala.
Intengo ihlanganisa ukudla okuyisithathu ngosuku. Iklayenti ingakhetha ingxenye noma inguqulo yesiSweden yokubeka ithebula. Imenyu inikeza ukudla okudliwayo okunikezwa abantu abanezinkinga ezithile zezempilo (ngokusho kobufakazi bukadokotela). Ukudla kunikezwa ekamelweni lokudlela le-resort yezempilo "Berminvody".
I-Sanatorium, isithombe esingacatshangwa kulokhu okuqukethwe, sinakekela impilo yezivakashi zayo, ngakho ukudla lapha kulinganisiwe futhi kuhlanzekile. Ematafuleni nsuku zonke ungabona inyama nezinhlanzi ezidliwayo, imifino nezithelo.
Ukuze induduzo yezivakashi ifakwe indawo ehlanzekile ebhishi ogwini lolwandle oluhle kakhulu. Umgwaqo ogwini uhamba nge-alley eluhlaza futhi ungathathi imizuzu engaphezu kwemihlanu. Ngaphandle, ezungezwe izihlahla ezinqabile, ungakwazi ukushisa ilanga, ukugeza emanzini ahlanzekile neludumele. I-Sanatorium "i-Bermindvody" inikeza izivakashi zayo imisebenzi ehlukahlukene yamanzi: ukushayela, ukudoba, imicimbi yezemidlalo.
Ukwelashwa kanye nephrofayili yokuxilonga
Okukhethekile kwi-dispensary ngeziqondiso ezahlukene zokwelapha. Isisekelo sokuxilonga sinebuchwepheshe besimanje: i-X ray, i-ultrasound, i-endoscopy. Ngaphambi kokuba kuqashwe ukwelashwa, umuntu omusha ngamunye kumele adlulise izivivinyo ezidingekayo futhi axoxisane nongcweti.
Inkimbinkimbi inenkampane yabantwana "BMW" yabasha abanezifo ezihlukahlukene. Esikhathini sokuhlala kukhona ama-gastroenterology, i-endocrinology kanye ne-urology. Ukuvuselelwa kweziguli ngemuva kokulimala kanzima nokuhlinzwa. I-Sanatorium "i-Bermindvody" isungulwe ekusebenziseni i-psychotherapy, i-deontology (imfundiso yokuziphatha nemigomo yokuziphatha) kanye nokuzivocavoca kwezokwelapha.
Ukuzivocavoca umzimba okhethekile kuye kwasungulwa ukuze kuthuthukiswe isimo jikelele, futhi ukuhamba ngezinkambo kwenziwa ezindaweni. Ukuze kukhululwe futhi kukhululeke ubuhlungu, kusetshenziselwa ukugcoba umzimba. Ukunakwa okukhethekile kubhalwa i-hydrotherapy kanye nokwelapha udaka. Amanzi amaminerali asetshenziswa ngendlela yokugeza, i-appliqués, i-showering, ukuchelela, ukuzwa nokuhlanza.
Sebenzisa uketshezi oluwusizo nangaphakathi - kokubili kufudumele futhi kufudumele. Amanzi abizwa ngokubunjwa kwawo okuyingqayizivele (iqoqo lezinhlamvu ezincane, izinto eziphilayo, i- asilicic acid), lithinta kakhulu izitho zokugaya, isimiso sezinzwa esisemkhatsini, isimiso se-musculoskeletal, izinqubo ze-endocrine kanye nezindlela zokusebenzisa umzimba.
Labo abanenhlanhla yokuphumula kuleli paradesi, bazimisele ukuza lapha futhi. Endlini yokugibela ayinikezwa kuphela ukwelashwa kwekhwalithi, kodwa futhi nokuphumula okugcwele. Izimo eziduduzayo zabantu abaneminyaka ehlukile zidalwa. I-cinema ivuliwe, lapho ukuzijabulisa kuqhutshwa njalo ngokuhlanganyela kwabenzi bezinhlobonhlobo zezinhlobo ezihlukene, amaqembu nezingane nentsha.
I-Sanatorium "i-Bermindvody" iphinde ivule umtapo wezincwadi zabathandi bezincwadi ezinegumbi elikhulu lokufunda. Kukhona iklabhu yokudansa, indawo yokudlala yabantwana ifakwe. Kukhona imyuziyamu yomlando womuzi, oveza imibukiso eyithakazelisayo, imibiko yasendulo nemifanekiso. Uzofunda ulwazi oluningi lokufundisa futhi ujwayele i-resort.
Ukuzilibazisa okusebenzayo (amabhayisikili, ama-rollers, imidlalo yemidlalo) ensimini yabelwe izindawo ezikhethekile. Isakhiwo № 9 has a swimming pool yangasese. Kukhona i-imeyili, ukuqasha imishini yezemidlalo, ama-ATM, amahhovisi okushintshanisa, ubuhle be-salon kanye nekhemisi.
Abavakashi bafuna ukukhuluma ngenhloso yezempilo "Berminvody". Ukubuyekezwa kweSanatorium kusuka kuzivakashi ezinelisekile kutholwa njalo. Nakuba kukhona nalabo abaveza ukunganeliseki ngokuphathelene nezimo zokuphila, izinga lokunakekelwa kanye nezinsizakalo zezokwelapha ezinikeziwe. Noma kunjalo, kunezinkulumo ezimbalwa ezingathandeki.
Ikakhulukazi e-resort izingane ezazithandayo, ngoba uhambo lwazo lwezinkundla aluzange libaleke. Uhambo oluthakazelisayo luzokhunjulwa ngezinsuku ezijabulisayo, ezinhle futhi eziqhakazile. Ukumemeza okuhle kuqondiswa kubasebenzi bezokwelapha abathintekayo, ukudla kanye nemisebenzi eminingi yokuzilibazisa. Umkhathi okhululekile wokugubha, ukuthakazelelwa nokungenisa izihambi kuzonikeza izinto eziningi ezimnandi.
Inhlanhla - ke ... incazelo yegama elithi. Luck kanye inhlanhla, impumelelo
Isifo samaphaphu e Cats: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Umhlanganyeli - kuyinto isigaba kwezomnotho
Hitler wafa: izinguqulo enye